AKHRISO+MAGACYADA: Mudanayaasha B Faderaalka Somalia ee maanta soo jeediyey in dib loo dhigo Qaraarka mamnuucaya DP WORLD? – Puntlandtimes
AKHRISO+MAGACYADA: Mudanayaasha B Faderaalka Somalia ee maanta soo jeediyey in dib loo dhigo Qaraarka mamnuucaya DP WORLD?
MUQDISHO(P-TIMES)- Puntlandtimes.com ayaa todobaadkii hore sheegtay in ay baarlamaanka Soomaaliya, gaar ahaana Xildhibaano kasoo jeeda dhinaca Somaliland ay xooga saarayeen sidii loo baajin lahaa mooshin ka dhan ah Shirkada DP WORLD ee laga leeyahay dalka Imaaraatka Carabta ee lagu wareejiyey dekeda magaalada Berbera.
Mudanayaashaas waxay maanta kalfadhiga baarlamaanka Soomaaliya ka hor akhriyeen nuqul qoraaleed ay soo saareen oo ay ku codsanayaan in dib loo dhigo ka hadalka arrimahan, balse taas ayaa socon weyday markii codka kalsoonida ay kawaayeen baarlamaanka.
Xildhibaan Cabdiraxmaan Maxamed Ibbi oo nuqulka akhriyey ayaa sheegay in ay codsanayaan in jaanis lasiiyo wada hadalada Soomaaliya & Somaliland, kaas oo muhiim ah, sidaas oo kalena wuxuu codsaday in ay waajib tahay in dadaalada siyaasadeed waqti lasiiyo.
Xildhibaan Ibbi wuxuu kaloo sheegay in la gaaray waqtigii la muujin lahaa biseyl siyaasadeed oo wanaagsan, laakiin wuxuu sheegay in ay xooga saarayaan sidii wax looga qaban lahaa arrimaha Soomaaliya.
Magacyada Xildhibaanada maanta codsaday in dib loo dhigo ka doodida arrimaha Mashaariicda DP WORLD ayaa kala ahaaa.
Cabdiraxmaan Maxamed Ibbi
Axmed Maxamuud SHeekh Dhagaweyne
Maxamed Ibraahin Cabdi (Dijeeye
Hoda Axmed Cali
Aamino SHeekh Osmaan
waa in xasaanada xildhibaanimo laga qaada,tuugo weeye
Intaasaa caqli usaaxiiba fahmayna waxanu kolba hirgeli maayo waxna kama beddelayo harumarinta dekedda berbera oo somalia amarkeedu muqdishoba si fiican ugama sheqeeyee umadda soomaaliyeed hasii kala fogaynina.marka taariikhdaa xusi doonta. hadalkooduna waa waxba kama jiraan meel uu ka shaqaynayaana ma jirto kkkk marka dhawaan la bilaabo maxay Ku hadlayaan weji gabaxooda. soo xaalkoodu noqon maayo dameer cidla ka ciyay.
Habar baa iska hawhawlehe heelada ino tuma walaahay waa yaab
waa umad xag alla iyo xag ay u socdaan aan garanayn wax u wanaagsan iyo wax u xun baa iskaga khaldan afxumo baa la yidhi colaadna waxba kaagama tarto nabadna way kaa kaxaysaa
bal maxaanu idinka sidanaa gurigiinii baa gubanaya oo guri aydaan awood iyo tamar toona aydaan wax ku yeeli karin baad leediin mooshin baanu kaga hortagaynaa wax qabsigooda iyo horumarkooda walaahay waa kalmad ilaahay loogu dhaartee in aad iska cideen kuwinaasu taakadaana ima yeeli kartaan colaad aad ka nool iyo ka caloosha ku jira aad ka gasheen mooyee indhihiinoo shan iyo toban ah baanu wax walba qabsanaynaa sidaa aad imikaba aragtaan iyadoo la aqoonsaday oo wadamada caalamku nagu soo qulqulayaana ilaahay waxan ka baryayaa in intiinaa qolkaa manta isku soo xidhay oo nool inaad aragtaan somaliland oo caalamka calankeeda tawxiidka lihi ka babanayo waxaanan idin sheegayaa calankaa towxiidka lihi in uu ka dego berbera oo uu calankaa madow ee ilaahay hoos u dhigay eed haysataan in aanu soo noqonayn ee sidaa ku biya caba kor iyo hoosba wax laydiinku sheeg wan weynse ilaa la gowraco indhihiisu cirka ma arkaane wax yar na suga